China Izibuko zelanga ezihlotshisiwe zamadoda nabesifazane Ilanga lezibuko Umbala we-Mirror Lens 100% UV Ukuvimbela Ukukhiqiza Nokwakha | Baolai
Izibuko zelanga ezikhanyisiwe zamadoda nabesifazane Izibuko zelanga Umbala we-Mirror Lens 100% UV Ukuvinjwa
1. Uhlaka lweplastiki
3. ★ VIKELA AMEHLO AKHO NGESITAYELA ▶ Senze izibuko zethu ezigqanyisiwe UKUVIKELA amehlo akho ngenkathi uphume ngaphansi kwelanga eliyingozi imisebe ye-UV futhi ikwenze ubukeke UNGAVUMELEKI ngasikhathi sinye, ngoba siyazi ukuthi impilo nesitayela zombili zibalulekile. Noma ngabe uyashayela, uhamba ngezinyawo noma usebenza, noma ngabe uyindoda noma ungowesifazane, zilungiselele konke OKUKHELEKILE ongakuthola nomona wabo bonke labo abangakwazi ukuthola IMFIHLO YAKHO ENCANE: Izibuko Zakho Zelanga zeKALIYADI.
4. ★ PHUMULA OKWENGEZIWE YONKE IMIHLA ▶ Lezo zibuko zelanga ziza namalensi aphakanyisiwe aphezulu esiwahlole ngokuhamba kwesikhathi. Ukwehlukaniswa kunciphisa ukukhanya okukhonjiswa yizibuko, izinto ezicwebezelayo noma ezipholishiwe noma olunye uhlobo lokukhanya kwemisebe yelanga. Uzozizwa amehlo akho ekhululekile unomphela ngoba ngeke usaphalaza! Noma ngabe ushayela ngemoto uya emsebenzini, uhamba epaki noma ushisa ilanga kahle olwandle, uzobe USUKHATHELE NGAPHANSI ekupheleni kosuku ngoba amehlo akho APHUMUZEKE KAKHULU.
5. ★ BHEKA UMHLABA EMIBALWENI YAYO YANGEMPELA ▶ Amalensi e-HD akhanyiswe ngezingilazi zethu zelanga anikeza UKUQONDA KWEMIBALA YANGEMPELA ngenxa yombala ongathathi hlangothi nombono weCLEAR ngokususa ukukhanya okukhanyayo nokusakazekile. Ngakho-ke uzokwazi ukujabulela izibuko zelanga phakathi nayo yonke imisebenzi yakho yangaphandle, ukushayela, ukudoba noma yimuphi umdlalo wamanzi. CABANGA NGOKUTHI UZOZIBONA UMUHLE KANGAKANANI ukungakhathazeki ngempilo yamehlo akho ngenkathi ukwazi ukujabulela nokubabaza umhlaba ngayo yonke imininingwane enhle.
6. ★ HAMBA MAHHALA UZE UKHULULEKE FREE Siyazi ukuthi amafreyimu angakhululekile angaba kanjani nokuthi lokhu kuthinta kanjani wonke umuntu ogqokile. Siyawukhathalela umbono wakho futhi sifuna ukukusiza ugcine izibuko zakho zelanga zivulekile njengoba nje uzidinga. Ngakho-ke sithathe izinto ezilula kakhulu zohlaka lwengilazi, amalensi ahlukaniswe kahle futhi sinakekele ukuze wonke umphetho ubushelelezi futhi upholishwe ukuze uzokhohlwa ukuthi uwagqoka elangeni. Ukugqoka izibuko zelanga akukaze kuphumule ngokwengeziwe, kuphephe futhi kukhululeke njengamanje!
Into NO. 10161-6354
Usayizi 53x60x17 cm
Langaphambilini Izibuko zelanga ze-Aviator Zamadoda 100% UV Protection Goggle Alloy Frame
Olandelayo: Ubuningi bezibuko zelanga zabadala zeqembu labantu abathanda i-Retro Classic Shades
I-Aviator Sunglass Yabesilisa 100% UV Ukuvikelwa G ...